महान खेलाडीको विषयमा बार्सिलोना र युभेन्टसको जुहारी !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलमहान खेलाडीको विषयमा बार्सिलोना र युभेन्टसको जुहारी !
शुक्रबार, १४ कात्तिक, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, १४ कात्तिक । च्याम्पियन्स लिगमा इटालियन क्लब युभेन्टसमाथि जित निकालेपछि बार्सिलोनाले विवादास्पद ट्वीट गरेको छ । बुधबार राति भएको समूह चरणको खेलमा बार्सिलोनाले युभेन्टसलाई उसैको मैदानमा २–० गोलले हराएको थियो ।
बार्सिलोनाको जितमा ओस्मान डेम्बेले र कप्तान लियोनल मेस्सीले एक–एक गोल गरेका थिए । टुरिनमा डेम्बेलेले १४औं मिनेट र मेस्सीले खेलको इन्ज्युरी समयमा पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए ।
जितपछि बार्सिलोनाले कप्तान मेस्सीलाई संकेत गर्दै विवादास्पद ट्वीट गरेको थियो, जसमा युभेन्टसले पनि जवाफ फर्कायो । बार्सिलोनाले ट्वीटमा लेखेको थियो, ‘हामी खुशी छौं कि तिमीहरूले आफ्नै मैदानमा ‘गट’ (ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम’लाई देख्यौ ।’
जवाफमा युभेन्टसले बार्सिलोनालाई उसको शब्दकोष गलत भएको बतायो । क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई इंगित गर्दै युभेन्टसले लेखेको छ, ‘सम्भवतः तिमीहरूले गलत शब्दकोष हेरेको हुनुपर्छ, क्याप नोउमा हामी वास्तविक गट देखाउँछौं ।’
बुधबारको उक्त खेलमा पोर्चुगिज स्ट्राइकर रोनाल्डोले खेलेका थिएनन् । कोरोना संक्रमण भएपछि उनी आइसोलेशनमा रहेका छन् । बार्सिलोनाविरुद्धको अर्को खेलमा भने उनको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
समूह चरणकै अर्को खेलमा बार्सिलोनाले आफ्नै मैदान क्याप नोउमा युभेन्टसलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दैछ ।